Myanmar Defence Weapons: သတိထား လေ့လာနိုင်စေရန်အတွက်
moeaung January 18, 2013 at 11:28 PM
ဘာမှာဂရုစိုက်နေစရာမလိုဘူး မြန်မာပြည်မှာ ပြည်သူတွေနဲ့တပ်မတော်ပူပေါင်းပြီး လေယဉ်ေ၇ယဉ် စစ်သုံးပစည်းတွေလုပ်လုပ်၇တယ် စီုး၇ကသာ ဒီလမ်းကြောင်တွေဖွင့်ပေပါ ပညာရှင်တွေရှိပါသေးတယ် စိုး၇ငွေကြေးနဲ့ပေါ့လေ
than win tun January 19, 2013 at 6:35 AM
လေတပ်နဲ့ ကြည်းတပ် ကိုတိုးချဲရလိမ့်မယ်ထင် တယ် လေတပ်က ရေတပ်ကို ထောက်ပံ့ ထားလိုရ တယ် ကျွန်တော် အမြင် ပြောတာပါ
kyaw san January 19, 2013 at 8:10 PM
Min Thet January 20, 2013 at 7:07 AM
ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကထိုင်းစစ်သဘောကျင်းနဲ့ကပ်ရက် sattahip navy ship yard. သူတို့တရုတ်စစ်သဘော်တွေကိုအဆင့်မြှင့်နေတာ။ photo တော့မရိုက်ချင်ဘူးတော်ကြာပြသနာတတ်မှာဆိုလို့၊ carrier ကိုတောင်2012 မှာdock တင်သေးလို့photo ရိုက်ထားသေးတယ်... ၄xx series china made ရဲအမြှောက်ကိုပြောင်းတပ်နေတာ အတော်ကိုကြီးတယ်.. ဘယ်လောက်mm လဲတော့မသိဘူး၊ လက်ရှိလဲ 5xxseries ကို BAE system ရဲ့designနဲဆောက်နေတာ... အတော်ပြီနေပြီ... stealth design နဲ့တူတယ်....မြန်မာမှာလဲအဲလိုအဆင့်မြှင့်သင့်နေပြီး... တခါတလေဒီblog ကိုကြည့်ပြီးကို့ရေတပ်ကိုတော်ရင်လေးမိတယ်... thai ရေတပ်နဲ့မြန်မာရေတပ်... စစ်လက်နက်ပိုင်းမှာလိုက်မှီဖို့အများကြီးလိုနေသေးတယ်...
thettin January 21, 2013 at 3:05 AM
i believe national war between Thailand and Bangladesh is low in current situation. we should more emphasize on coastal guard and patrol operation, this isabigger threat to national security.
sulatt January 22, 2013 at 11:47 AM
ကိုမြန်မာရဲ့ email လေး တစိတ်လောက် သိချင်လို့ပါ
အကူအညီ တစ်ခုလောက် တောင်းချင်လို့ပါ အကို
heart rebel February 19, 2013 at 10:13 AM
myanmar မှာ တပ်မ တော် ၂ ခုတိုး သင့်နေပြီ။ coast guard နဲ marine ကို ပြော တာ ပါ
အိပ်နေတာပဲကောင်းတယ် February 21, 2013 at 4:40 AM
kht May 26, 2013 at 11:43 AM
နေဗီဆီးလ် က လီးမလို.လား မင်းအမလိုးမလို.ထားမလို.လား နေဗီဆီးလ် ရှိတဲ.နေရာတွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမင်းသိလား နာတို. ဗိုလ်ချုပ်ဘာပြောခဲ.မင်းမသိဘူး လီး brain နဲ. မင်းမေလိုးမယ်.ကောင်တွေ ခေါ်ထားမလို.လား
shanmin thar January 24, 2015 at 9:05 AM
တပ်ရင်းတရင်းကို လူ ၂၅၀လောက်သတ်မှတ်ပါလား။တပ်ရင်းကများပြီးလူအင်အားမရှိဖြစ်နေမယ်။စစ်ကြောင်း၁က ၁၀၀ စစ်ကြောင်း၂က၁၀၀ နောက်ချန်နဲ့ သင်တန်းအတွက်၅၀ပေါ့ ။နောက်တန်းမှာရဲမေကင်းစောင့် တာလည်းမဟုတ်သေးဘူး။တပ်ရင်းတိုင်းကို comando တွေလိုသုံးလို့ ရအောင်လုပ်ပါ။ကျည်ကာအင်းကျီ ဦးထုပ်တွေလည်းလူတိုင်းကိုပေးနိုင်အောင်လုပ်ပါ။စစ်သားတယောက်ကိုတွေ့ တာနဲ့ ရန်သူကြောက်သွားလောက်အောင်စစ်ပစ္စည်းတွေတပ်ဆင်ပေးပါ။အဲ့ ဒါစိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးပဲ။တပ်မ၈၈ကို ကေအိုင်အေကြောက်တာလူလေးတွေကငယ်တာမပါဘူး။ရွယ်တူတောင့် တောင့် တင်းတင်းတွေ။လူမြင်တာနဲ့ ရှိန်တယ်ဆိုတာအဲ့ ဒါပေါ့ ။